>lọ>Product>Agba Acylic Sheet>Translucent & Opaque agba Acryli Sheet
Mpempe akwụkwọ acrylic nke na-acha uhie uhie na-agbasa mgbe ọkụ eke na-agafe na ha. Mpempe akwụkwọ acrylic agba opaque anaghị ekwe ka ọkụ gafee ebe ọ na-ejigide njirimara ndị ọzọ nke mpempe akwụkwọ acrylic nkedo. Ha niile nwere elu na-egbuke egbuke, ị nwere ike iji ha maka akara ngosi, ngwá ụlọ, ụlọ ahịa ihe ngosi, ihe ndozi ụlọ ahịa, ọkụ na ihe ndị ọzọ.
Equipment Ụdị iko dị mbubata (nke sitere na Pilkington Glass na UK)
Transmit Mgbasa ozi dị elu ruo 93%;
◇ A na-ebubata ihe nkiri nchebe, dị arọ ma dị mfe iwepu, ọ dịghị gluu fọdụrụ.
ERB .R. Okpomkwem Cal/gr ℃ 0.35
Mpempe akwụkwọ acrylic anyị kachasị mma nwere nkọwa doro anya, ihu igwe na ike dị elu. Enwere ike ịme ha thermoformed, bee, gbapuo, gbadaa, igwe, kanye, na-egbu maramara na glued.Ha nwere ike itinye aka na akara ngosi na mgbasa ozi / ọgwụ / ihe mgbochi acrylic / akụrụngwa / sanitaryware / ihe owuwu / ime ụlọ na arịa ụlọ / ụgbọ ala / ntụrụndụ / ụlọ ọrụ ụlọ. / acrylic ọla na ihe ndị ọzọ.
◇ Asambodo nke nkedo acrylic mpempe akwụkwọ anyị nwetara: ISO 9001, CE, SGS DE, CNAS akwụkwọ.